China ngaphakathi-emhlabeni GL112H mveliso kunye nabenzi | Ukuzalwa
Umdlalo omncinci ogqityiweyo ogqityiweyo kunye ne-CREE LED Package kunye ne-20/60 degree degree. Iglasi enetafile ene-Ultra low-glare, ukukhanya kwe-IP68 komhlaba kwenziwa ngeBanga lama-316 leNsimbi engenazintsimbi. itshintshiwe, i-1-10V kunye ne-DALI izisombululo ezinokubakho. Nangona oku kukhanyiswa kwangaphandle kukhanyise kancinci ngobukhulu, akuchaphazeli ulawulo lobushushu ngombala oguqukayo wale mveliso, kusenza indalo ityebe. Esi sibane sangaphantsi komhlaba sifihla amaso esibane, kwaye siyilwe ngobuqili. Umdaka omnyama ungalinciphisa kakhulu ilitha lokukhanya kwesibane. Uyilo, sikwanaso nesiphatho sesibane esikwere ngokuma kwaye ubungakanani bubukhulu bemibala. Ke ngoko, le mveliso ifaneleke ngakumbi kwizikwere zomhlaba ezimnyama, iinkundla, kunye nodonga olungaphandle lweevenkile ezinkulu. Sisebenzise phantse i-50,000pcs zale mveliso ukuhombisa udonga lwangaphandle lwe-Shenzhen Gemdale Parkway enkulu yezitolo ezinkulu, kwaye sonke isakhiwo saba luphawu kule ndawo.
Ezothutho kunye nokupakisha
Umthombo wokukhanya kwe-LED Amandla ePhakamileyo ePhakamileyo
Umbala wokuKhanya CW.WW, NW, Bomvu, Luhlaza, Luhlaza, Luhlaza, Amber
Izinto eziphathekayo SUS316
Ukukhanya I-S2O ° / F6O °
Ukunikezwa amandla N / A
Umgangatho we-IP IP68
Iimvume I-CE, i-RoHS, IP
Ubushushu obugciniwe -2O ° C ~ + 45 ° C
Umndilili wobomi 5O, OOOHrs
Izixhobo (Ngokuzithandela) Ewe
Izicelo Ngaphakathi / ngaphandle / Indawo yokuma komhlaba / ukuntywila
GL112H PHANTSI UKUKHANYA
Umzekelo No. Uhlobo lwe-LED Umbala Umqadi IPowerMode Igalelo Iingcingo Intambo Amandla I-Flux ekhanyayo Ubungakanani Qhuba ubungakanani
I-GL112H CREE I-CW, WW, NW, Luhlaza oBomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, Amber S20 / F60 Okwangoku I-350mA Uthotho 1.1M 2X0.4MMM Intambo 1W 100LM D23X40 D19
I-GL112HD CREE I-CW, WW, NW, Luhlaza oBomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, Amber S20 / F60 Umbane oqhubekayo 24VDC Iyafana 1.1M 2X0.4MMM Intambo 1.3W 100LM I-D23x45 D19
* IES Inkxaso yedatha.
■ Imephu yeprojekthi
Okulandelayo: Ngaphakathi-Umhlaba GL112
Zonke iimveliso ziya kupakishwa zize zithunyelwe kuphela emva kokuba zonke iimveliso zigqithile kwiimvavanyo ezahlukeneyo zesalathiso, kwaye ukupakishwa yeyona nto ibalulekileyo engenakuhoywa. Njengoko izibane zensimbi ezingenasici zinzima kakhulu, sikhethe ezona zilungileyo kunye nezona zilukhuni ibhokisi eneenkcukacha zokupakisha ukuqinisekisa ukuba imveliso inokukhuseleka kakuhle kwimpembelelo okanye kumaqhuma ngexesha lokuhamba. Imveliso nganye ye-Oubo ihambelana nebhokisi yangaphakathi eyahlukileyo kwaye iya kukhetha uhlobo lokupakisha oluhambelana nobume bayo, imeko kunye nobunzima bempahla ethunyelwayo ukuqinisekisa ukuba imveliso nganye ipakishwe ngaphandle kokushiya umsantsa phakathi kwebhokisi kunye nemveliso ilungisiwe. ibhokisi. Ukupakisha kwethu rhoqo yibhokisi yangaphakathi emdaka eyenziwe ngamnyama kunye nebhokisi engaphandle emdaka. Ukuba umthengi kufuneka enze ibhokisi yemibala ethile kwimveliso, sinokuyiphumeza, okoko nje wazisa ukuthengisa kwethu kwangaphambili, siya kwenza uhlengahlengiso oluhambelanayo kwinqanaba lokuqala.
Njengomenzi wobungcali wezibane zangaphandle zensimbi ezingenasici, u-Eurborn uneseti yakhe yovavanyo olupheleleyo lweelebhu. Asinakuthembela kubantu besithathu abathe bakhutshelwa ngaphandle kuba sele sinothotho lwezixhobo zobuchwephesha eziphambili nezigqibeleleyo, kwaye zonke izixhobo zihlala zihlolwa kwaye zigcinwa. Qinisekisa ukuba zonke izixhobo zinokusebenza ngesiqhelo kwaye zenze uhlengahlengiso kwangexesha kunye nolawulo lweemvavanyo ezinxulumene nemveliso okokuqala ngqa.
Indibano yokufundela yase-Eurborn inoomatshini abaninzi abaziingcali kunye nezixhobo zovavanyo ezinje ngee-oveni ezifudumeza umoya, oomatshini bokuphelisa umoya, amagumbi ovavanyo lwe-UV ye-ultraviolet, oomatshini bokumakisha i-laser, amagumbi ovavanyo lobushushu rhoqo kunye nokufuma, oomatshini bokuvavanya ityuwa, iinkqubo zohlalutyo olukhawulezayo lwe-LED, ukusasazeka kweLuminous Inkqubo yovavanyo (uvavanyo lwe-IES), i-UV ephilisa i-oveni kunye ne-elektroniki yokumisa i-oveni okomatshini njalo njalo. Singafezekisa inkqubo ebanzi yolawulo lomgangatho kuyo yonke imveliso esiyivelisayo.
Imveliso nganye iya kuvavanywa i-100% yovavanyo lweparameter, i-100% yokuvavanywa kokuguga kunye ne-100% yovavanyo lwamanzi. Ngokweminyaka emininzi yamava emveliso, imeko-bume ejongene nayo yile mveliso ingamakhulu amaxesha okomelela ngakumbi kunezibane zangaphakathi zangaphandle kunye nasemhlabeni ezibane zentsimbi. Siyazi kakuhle ukuba isibane asinakubona naziphi na iingxaki ngexesha elifutshane kwiindawo eziqhelekileyo. Kwiimveliso ze-Eurborn, sijolise ngakumbi ekuqinisekiseni ukuba isibane sinokufikelela kwintsebenzo ezinzileyo yexesha elide kwiindawo ezahlukeneyo ezirhabaxa. Kwimeko yesiqhelo, uvavanyo lwethu lwendalo olulinganisiweyo luphindaphindeka nzima. Indawo engqongileyo inokubonisa umgangatho wezibane ze-LED ukuqinisekisa ukuba akukho mveliso ineziphene. Kuphela kusemva kokuba kuhlolwe ngokusebenzisa iileya apho u-Ober eza kusihambisa kweyona mveliso intle kuthi Isandla somthengi.
Umzimba wesibane wemveliso wenziwe ngentsimbi ye-SNS316L. I-316 yentsimbi engenasici iqulethe i-Mo, ebhetele ekumelaneni nomhlwa kune-304 yentsimbi engenasiphelo kwindawo ezinobushushu obuphezulu. I-316 ikakhulu inciphisa umxholo we-Cr kwaye yonyusa umxholo we-Ni kwaye inyuse i-Mo2% ~ 3%. Ke ngoko, amandla ayo okulwa nomhlwa womelele kunama-304, alungele ukusetyenziswa kwimichiza, kumanzi olwandle nakwezinye iindawo.
2.Umthombo wokukhanya kwe-LED wamkela uphawu lwe-CREE. I-CREE ngumvelisi okhanyayo okhanyayo kunye nomenzi we-semiconductor kwimarike. Uncedo lwe-chip luvela kwizinto ze-silicon carbide (SiC), enokusebenzisa amandla amaninzi kwindawo encinci, ngelixa uthelekisa Obunye ubuchwephesha obukhoyo, izinto kunye neemveliso zivelisa ubushushu obuncinci. I-CREE LED idibanisa amandla e-InGaN asebenza ngamandla kunye nezinto ze-G · SIC® zeenkampani zibe yinto enye, ukuze amandla aphezulu kunye nokusebenza kakuhle kwe-LED kufezekise eyona ndleko yokusebenza.
3.Iglasi isebenzisa iglasi enomsindo + yinxalenye yesikrini sesilika, kwaye ubukhulu beglasi yi-3-12mm.
I-4.Inkampani ihlala ikhetha i-aluminium ye-aluminium ephezulu ene-thermal conductivity engaphezulu kwe-2.0WM / K. Imigca yealuminium isetyenziswa njengesixhobo sokuhambisa ubushushu ngokuthe ngqo kwii-LEDs, ezinxulumene ngokusondeleyo nobomi bokusebenza kwee-LED. Isixhobo se-aluminium esisezantsi sokuqhuba esine-conduction kunye nobuchule bokuhambisa ubushushu, kwaye kufaneleke ngakumbi kwiimveliso ezifuna ukusasazeka kobushushu obuphezulu, ngakumbi ii-LED ezinamandla aphezulu.
Inqaku elibalulekileyo: Siza kubeka phambili imiyalezo ebandakanya "igama lenkampani". Nceda uqiniseke ukuba ushiya olu lwazi "ngombuzo wakho". Enkosi!
Ukukhanya komgca EU2001
Ukukhanya komgca EU2009HP
Isibane eseludongeni ML105
Gl118rgb-ls Ukukhanya okuPhantsi